दसैंअघि होला त लकडाउन ? — Bhaktapurpost.com
काठमाडौं, २२ असोज । मुलुकभर बुधबार एकै दिन ३ हजार ४ सय ३९ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । दैनिक संक्रमणको यो संख्या हालसम्मकै बढी हो । सक्रिय संक्रमितको संख्या पनि २५ हजार ७ पुगेको छ । कोरोना संक्रमण तीव्र वृद्धि भए पनि सरकार भरसक लकडाउन वा स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा नगर्ने पक्षमा देखिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले कतिपय अस्पतालमा थप शय्या व्यवस्थापन गरेर भए पनि लकडाउन घोषणा नगर्ने योजना रहेको बताए । ‘दसैंअघि भरसक लकडाउन वा स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्ने कुनै योजना छैन’, मन्त्रालयअन्तर्गतको इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टमका ती पदाधिकारीले भने ।
कोरोना संक्रमितहरू घरमै र संस्थागत आइसोलेसनमा बसिरहेका छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले संस्थागत आइसोलेसनमा १० हजार ५ सय ९६ जना छन्। घरमै ९ हजार १ सय ७२ जना आइसोलेसनमा बसेको प्रवक्ता गौतमको भनाइ छ । प्रवक्ता डा. गौतमले पनि तत्काल लकडाउन घोषणा गर्नुको औचित्य नभएको बताए । ‘अस्पतालमा शय्या पुगेसम्म लकडाउन घोषणा हुँदैन’, उनले भने, ‘स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरेर पनि के गर्ने ? बाहिर निस्कँदा नागरिकले मास्क लगाउने र भौतिक दूरी कायम गरे पनि हुन्छ । जनताले केही नगर्ने, सरकारले विभिन्न घोषणा गरेर मात्र के गर्ने ?’ उनले नै केही समयअघि नियमित प्रेस ब्रिफिङका क्रममा सक्रिय संक्रमित २५ हजार नाघे लकडाउन हुन सक्ने बताएका थिए । अन्नपूर्ण पोस्ट्बाट